साप्ताहिक साहित्य | गणेश कार्कीको ब्लग
सडक साहित्यका केहि तस्विरहरु
Posted on April 16, 2011 by नेपाली मुटु
राजनीति अनि कुरीतिका कुरा मात्रै कति गर्नु ? आउँनुहोस् आज रमाईलो गरौं, साप्ताहिक साहित्यमा सडक साहित्यका केहि तस्विरहरु हेरेर । तपाईसँग छन् भने पठाउँन नभुल्नु नि ।
अझै बाँकी छन् तस्विर
फोटोहरु : (मेरो होइन ।)
Filed under: साप्ताहिक साहित्य |	4 Comments »
Posted on April 9, 2011 by नेपाली मुटु
“फोन गर्दै गर्नु है ।”
“आ के फोन गर्नु ? को हौ र तिमी ? बोल्ने भए तिमी फोन गर, म बोलिदिउँला ।”
छुट्टिने दिन मलाई गाडीमा चढाउँन आउँदा भएको उसको र मेरो सानो संवाद हो यो । मैले ख्यालख्यालैमा भनिदिएँ, ‘के फोन गर्नु भनेर ।’ मैले यो पनि भनिदिएँ कि ‘तिमी को हौ र भनेर’ , उसले सुनिरही । केहि प्रतिक्रिया नै नजनाई । सायद उसलाई थाहा छ, म उबाट टाढा भए पनि दुरताको महसुस गर्न सक्दिन भन्ने । बिना सञ्चार रहन सक्दिन भन्ने । यसैले उसले कुनै अबरोध बिना नै मेरो कुरा भनि सक्न दिई । उ बुझ्छे, मेरो ओठको शब्द र मुटुको धड्कनमा कति फरक छ ?
बिदाईको क्ष्यण पनि अचम्मको हुन्छ । त्यो बेलाको भावना प्रसव वेदनामा रहेकी कुनै युवती झै पिडादायी हुन्छ । कँहि जाने कुराको खुसी त छदैछ । पछि फर्केर आउँदा पाइने आत्मियता त छदैछ तर पनि छुट्टिनु पर्ने विवशताले मुटु चिरिन्छ ।
मलाई थाहा थियो, उ मेरो जीवनको अभिन्न अंग हो । मलाई थाहा थियो, उ बिना मलाई धेरै गा¥हो हुन्छ । तर जब गाडी छुट्ने बेला उसँग बिदाईको हात हल्लाउँने बेला भयो तब थाहा पाएँ उ मेरो मुटु बनिसकिछ । उ मेरो सास बनिसकिछ, जसलाई छाड्दा जीवन बिहिन हुनु पर्ने रहेछ । आँखामा आँसु भरियो । कसैले देख्ला कि भन्ने डर उत्तिकै छ । गलामा केहि अड्किए जस्तै भयो । केहि बोल्न सकिन । जति उ बाट टाढा हुन्छु । लाग्छ, मुटु छोडिदैछ मेरो शरिरबाट । मृत्युको एक किसिमको अनुभव गरे मैले । हिडिरहेको गाडीबाट फाल हाली उसलाई अगांल्न मन लाग्यो । चिच्याएर एक पल्ट उसलाई बोलाउँन मन लाग्यो । तर लाचार म आफ्नै मुटु छोडी अन्तै दौडिरहे …………….।
Filed under: साप्ताहिक साहित्य |	Leaveacomment »
Posted on April 2, 2011 by नेपाली मुटु
उ गरिब थियो । यसैले उ सबैको हेलाको पात्र थियो । क्याम्पसमा पनि उसका अति कम साथी थिए । उसँग न राम्रा लुगा नै थिए न त अरु कुनै आकर्षक विशेषता नै । उसँग थियो त केवल मिहिनेती पढाई । त्यसकै कारण उ छात्रवृतिमा पढ्दै थियो । उ परिश्रम गर्न कति पनि धक मान्दैन थियो । तर पनि उसले मनमा एउटी युवतीलाई सजाउँन थाल्छ । उसको पनि त मन नै हो आखिर । उसलाई पनि ति युवतीको सामिप्यता पाउँन मन लाग्छ । उसले आफ्नो भावी पत्नी तिनै युवतीमा देख्छ । कुनै मौका पारेर एक दिन उसले एउटा पत्र मार्फत आफ्नो मन खोलीदिन्छ, ति युवतीको सामुन्नेमा ।
तर उसको प्रेम प्रस्ताव स्विकार गर्ने साहस कुन युवतीमा होला र ? आधुनिक समाजमा प्रतिष्ठा पाउँने उसँग कुनै साधन थिएन । उसको प्रेमप्रस्ताव लत्तिनु थियो, लत्तियो । यस्तैमा परिक्षा सकिए पछि सबै आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्छन् । उ पनि त्यस्तै कुनै लहरमा मिसिएर हराउँछ ।
केहि बर्ष पछि उ सोही ठाउँमा देखा पर्छ । तर उसको परिचय फेरिएर उ अरु नै केहि भइसकेको हुन्छ । उ रोगीको जीवनदाता डक्टर भएको हुन्छ । यस्तैमा एकदिन तिनै युवतीसँग भेट हुन्छ । त्यसपछि युवतीले अरु नियमित भेटहरुलाई अगाडी बढाउँछे । र, एकदिन प्रेमपत्र उसको हातमा थमाईदिन्छे ।
दिन बद्लिएको उसले महसुस गर्छ । उसको प्रेम अस्विकार भएको समयमा उ पुग्छ । आज उसैबाट प्रत्र प्राप्त हुँदा जितेको महसुस गर्छ । उ खुसी हुन्छ । आफ्नो पहिचान र व्याक्तित्वको कारण मात्र पत्र पाएको निष्कर्षमा पुग्न उसलाई बेर लाग्दैन । अनि आफ्नो फ्यालिएको पत्र सम्झिन्छ र, उसै गरेर हातको पत्र मिल्काउँछ । तिनै बिछोडिएका दुई प्रेमपत्रका लागि दुई थोपा आँशु खसाल्छ ।
मान्छे किन पलायनवादी छ हँ ?
Posted on March 12, 2011 by नेपाली मुटु
-राजेन्द्र आचार्य, दोलखा
समयले कति चाँडो नेटो काट्दो रहेछ । कुनै दिनको याद आउँदा मलाई अहिले अचम्म लाग्छ । त्यो समय खुसी लाग्छ र त्यो दिनको सम्झनामा डाको छोडेर रुन मन लाग्छ । स्कुलमा पढ्दा साथीहरुसँग हाँसखेल गरेको ख्याल ठट्टाको याद आउँछ । मलाई अब पनि कुनै त्यस्तो होला कि भन्ने भान हुन्छ । टेष्ट परिक्षा पछि छुट्टिने बेलामा भएको त्यो वनभोज कार्यक्रममा गरेको कामहरु मलाई अझ याद आइरहन्छ । स्कुले जीवनमा साथीहरु र शिक्षकको मायाले मलाई अरुपनि सताइरहन्छ । यसरी हाँसखेल गर्दा गर्दै एस.एल.सी. पनि राम्रै भयो । एस.एल.सी. सकिए पछि पनि केहि साथीहरुसँग रमाउँदा रमाउदै कति चाँडो एस.एल.सी. को नतिजा पनि प्रकाशित भइसकेछ ।
मैले बिहानै एस.एल.सी. को नतिजा प्रकाशित भएको सुने पछि झसगं भएँ । अब त क्याम्पस पढ्ने बेला पनि आउँन थाल्यो । तर फेरि मलाई झस्का लाग्यो कि यसपाली जम्मा ३८ प्रतिशत मात्र पास भए कतै म पनि त फेल भईन ।
म नतिजा हेर्नको लागि गए । जिउ झसगं भइरहेको थियो तर एक्कासी आफ्नो सिम्बोल नम्बर देख्दा मन हास्न थाल्यो । यसरी मेरो नतिजा थाहा पाउँदा सम्म हर्षित नै थिए । तर सधै हास्न सकिदो रहेनछ । मैले सुने कि मेरो अति मिलनसार तथा कक्षामा सबै भन्दा जान्ने साथी फेल भएको छ । जब कि परिक्षा सकिएर घर आउँदा उसले ८० प्रतिशत जति आउने आशा गरेको थियो । यसैले उ फेल भएको कुरा मलाई पत्यार लागेन तर पछि आफैले हेर्दा थाहा पाए उ साच्चै फेल नै भएको रहेछ । त्यस्तो मिलनसार साथी फेल भएको मैले सहन सकिन । सहने पनि कसरी जब कि हामी उक अर्काको सुख दुख बाड्ने गर्दथ्यौ । एस.एल.सी. पास भए पछि एउटै क्याम्पसमा पढ्ने कत्रो धोको थियो । जब कि त्यो अब पुरा नहुने भयो । उता उसलाई कस्तो भएको होला भनेर मलाई रुन मन लाग्यो । त्यती जान्ने मान्छे फेल हुदा केहि गल्ति भएको र पछि ठिक हुनेमा पनि आशालु थिए ।
यो कुरा शिक्षकलाई पनि थाहा भए पछि हामी हतार हतार साथीको घरमा पुग्यौं । बाटामा हुलमुल भएकाले म अलि पछाडि नै थिए । केहि पछि साथीकोमा म पुग्दा त सबै रोइरहेका थिए । उसका परिवारहरु डाको छोडेर रुदै थिए । अफसोच् साथीले आत्महत्या गरेछ । आफ्नो मिलनसार साथीको लाश देखेर म बेहोस भएछु । पछि ४ घण्टा पछि होस आउँदा मैले थाहा पाएँ म त अस्पतालमा रहेछु ।
यसरी सानो असफलताले पनि मान्छेलाई मृत्युमा पुर्याएको देखेर म सधै झस्किन्छु । मान्छे यति पलायनवादी किन छ हँ ? मनमनै प्रश्न गर्छु । के कायरताले असफलतालाई ढाक्छ र ?
Filed under: साप्ताहिक साहित्य |	1 Comment »